Waa maxay qaaliga qaaliga ah iyo midda madow ee qaaliga ah? Qaali ama la awoodi karo?
Dhuxul iyo qiimo midabkeedu qiimo leeyahay
Marka loo eego sayniska mira-cilmiyeedka, waxaa jira laba kala-soocid loogu talagalay guntooyinka: dhagaxyo qaali ah iyo dhagaxyo qaali ah.
Waxaa jira dhagax qaali ah 4 oo kaliya
4 dhagaxyo qaali ah waa dheeman, jilicsan, safafire, iyo xajin.
Qoysaska 70 iyo noocyada 500 waxaa lagu sifeeyay guntimaha
Kala duwanaanta dharka iyo dhagaxyada kale waa xaqiiqda ah in loo isticmaalo dahabka, halka dhagaxyada kalena aanay ahayn.
Ka soo horjeedda waxa dadka intooda badani aaminsan yihiin, sababta kaliya ee sababta dhagaxyada loo qoondeeyay sida qaali ah taariikhda. Run ahaantii, ku saabsan sanado ka hor 500, awoodda adduunkani waxay xiiseynayeen oo kaliya afar ka mid ah dhagaxyadan. Waqtigaas, dhagaxyada kale wax qiimo ah ma lahayn. Sidaa daraadeed waxaan tixgelin karnaa in ay ahayd dhagxyada casriga ah, wakhtigaas oo ay sii joogeen, illaa maanta, dhagaxyada ugu qiime badan ee awoodda leh.
Waxay u taagan tahay calaamad hanti iyo awood. Sababtuna waxay tahay sababahaas oo kale in weli ay weli yihiin, hadda, dhagaxyada ugu qaalisan.
Sidaas darteed ma jiro sharaxaad cilmi ah. Sababtoo ah waa suuq-geynta suuqa, ama sharciga dalabka iyo baahida.
Waxaad maqli doontaa wax ku saabsan opals “qaali ah”, tanzanites, alexandrites iyo dhagaxyo kale oo badan. Tani gabi ahaanba waa qalad. Laakiin waa barta wax lagu iibiyo ee ay u isticmaalaan ganacsatada jawharadu inay ku soo jiitaan macaamiisha, isla markaana ay qiimo ugu daraan dhagax, iyagoo rajeynaya inay helaan qiimo iib wanaagsan.
Inta badan ganacsatada ka ganacsada jawharadu ma ahan aqoonyahano cilmiga sayniska gemo waxayna badanaa u maleeyaan inay ogyihiin waxa ay ka hadlayaan, markay ogaadaan kaliya qiimaha iibkooda iyo qiimaha iibka ee ay rajaynayaan inay helaan. Intooda badani ma yaqaaniin farqiga u dhexeeya dhagaxa dabiiciga ah iyo dhagxaanta synthetic. Waa wax lala yaabo, miyaanay ahayn?
Taasi waa sababta ay u jiraan shaybaarro gemoloji ah oo caddeeya dhagxaanta. Tani waxay kordhisaa kharashka iibiyaha, laakiin waxay fududeyneysaa iibka.
Qiimaha qaaliga ah iyo midka qiimaha dhagaxyada qaali ah
Qalab kale oo kale ayaa ah in dhagaxyada qaaliga ah ee dabiiciga ah ay aad u qaali yihiin. Xaqiiqooyinka, tani mar walba run ma ahan. Dhab ahaan, dheeman, jilicsan, safiir ama dhoobo ayaa noqon kara mid dhaqaale ahaan la awoodi karo. Waxay kuxirantahay tayadooda. Inkastoo qaar ka mid ah dhagaxyo qiimo leh oo tayo sare leh ay ku kici karaan wax ka badan tan gunta tayada hooseeya.
Soo koobid, dhagaxyo qaali ah iyo mid yar oo qaali ah ayaa noqon kara mid aad u qaali ah ama aad u qiimo badan.